888 खेल समीक्षा
Mostrando: 1 - 10 को 10 RESULTADOS
युनिबेट क्यासिनो संसारकै सब भन्दा पुरानो र सबैभन्दा स्थापित लाइनहरु मध्ये एक हो, र हालसालै उनको मनाईयो 20 वार्षिकोत्सव. स्थापना गरियो 1997 Anders Strom द्वारा, सपना उनको लागि खेलको आफ्नो विशाल ज्ञान साझा गर्न को लागी थियो, त्यसैले खेलाडी क्यासिनो र अधिक जानकारी को सबै भन्दा गर्न सक्नुहुन्छ. यो दर्शन …
Bwin स्पेन मा र विश्व भर मा एक प्रसिद्ध अनलाइन पुस्तक निर्माता हो. BetandwinIn माथि उल्लेख गरिएको छ र यसमा सिर्जना गरिएको थियो 1997 अष्ट्रिया मा, सुरुमा संग 12 अनलाइन जुवामा भाग लिने कर्मचारीहरू. हाम्रो अन्तिम तीन बर्ष र भित्र 2001 तिनीहरूले जिब्राल्टरमा तिनीहरूको अपरेसनहरू सारिदिए. अधिग्रहण र को विस्तार …
हामीसँग अनलाइन साइटहरूको सूट छ जुन विभिन्न खेल र प्रत्यक्ष क्यासिनो खेलहरूमा केन्द्रित छ. यद्यपि कम्पनीले काम सुरु गर्यो 1997 लन्डनमा, यो मार्च सम्म थिएन 2008, जब लाइन मा एक विशेष प्रभाग सिर्जना गरिएको थियो 888 खेल होल्डिंगहरू. मनोरन्जन विकल्पहरू पूरा गर्नुहोस् र …
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूको लामो सूचीको रूपमा, Betfair एक शर्त को रूप मा एक लामो इतिहास छ. यो वर्षहरूमा शुरू भयो 90, विशेष गरी मा 1999, एन्ड्रयू र एडवर्ड र्राई ब्ल्याक द्वारा स्थापित. तर यो भर्खर मात्र भएको थियो जब त्यसले युनाइटेड किंगडममा यसको विस्तार सुरु गर्‍यो र आयरल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकामा यसको बजार विस्तार गर्‍यो. त्यस पछि, …
अनलाइन गेमिaएक व्यापक प्रवृत्ति भएको छ. संसारभरका खेलाडीहरू घरमा नै बानी छन्, उनीहरूका धेरै जसो लोकप्रिय क्यासिनो खेलहरू. यस Betsson.com समीक्षा को चारै तिर यी एक अनलाइन जुवा dens को वर्णन को बारे मा समीक्षा. वेबमा पैसा कमाउँदै …
SER सर्को क्यासिनो ध्यानपूर्वक विश्लेषण गरिएको छ र हामीलाई धेरै राम्रो प्रतिष्ठा दिईएको छ, सबै भन्दा राम्रो मान प्रस्ताव गर्दछ. हाम्रो अध्ययन मा, हामीले प्लेयर गुनासो खातामा लिएका छौं, राजस्व पूर्वानुमान, वास्तविक इजाजतपत्रको साथ, सेवाको गुणस्तर, सर्तहरू, प्रतिपूर्ति लाभ र सीमाहरू, र अन्य कारकहरू. सर्कस क्यासिनोको साथ साझेदारी छ …
इन्टरवेटि Cas क्यासिनोमा नाम दर्ता भएका खेलाडीहरूलाई उनीहरूको पहिलो जम्माको लागि स्वागत प्याक दिइन्छ. कमसेकम 10 € बोनस 100% भुक्तान गरिएको रकमको, को अधिकतम रकम 100 €. यी कुपनहरू सबै इन्टरवेटि games खेलहरूको लागि मान्य छन्, तर होईन …
लकिया क्यासिनो पीटी विश्लेषण गरियो र धेरै राम्रो प्रतिष्ठा प्रदान गर्दछ, यसको मतलब त्यो हो कि एक ठूलो क्यासिनो. हाम्रो अध्ययन मा, हामीले प्लेयर गुनासो खातामा लिएका छौं, नाफा अनुमान, प्रमाणिक इजाजतपत्रको रूपमा, सेवाको गुणस्तर, सर्तहरू, लाभ र भुक्तानी सीमा र अन्य कारकहरू. तल, कथा र विवरण पढ्नुहोस् …
सुर्टिया क्यासिनोले विश्लेषण गर्‍यो र हामीलाई धेरै राम्रो प्रतिष्ठा दियो, यसको मतलब यो एक धेरै राम्रो क्यासिनो हो. हाम्रो विचारमा, खेलाडी उजूरी छानबिन, अनुमानको फाइदा, लाइसेन्स, तालिकाको प्रामाणिकता, गुणवत्ता सेवाको साथ ग्राहकहरु, राज्य, नाफा मार्जिन र …
हालका वर्षहरूमा विभिन्न लोकप्रिय गेमिंग साइटहरू मध्ये, सायद विलियम हिल भन्दा बढी. यो बुझ्न गाह्रो छैन किन यदि हामी सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौं जुन यो मौकाको सब भन्दा पुरानो खेल हो. यो कार्य पेरिसमा लोकप्रिय केन्द्र भएको छ 2000, जब ऊ सुरु भयो …